Video Cropper maka Mac: Olee otú akuku Video na Mac (Mavericks gụnyere)
Video Cropper maka Mac: Olee otú akuku Video on Mac (Yosemite gụnyere)
A ga doro anya na-adị mgbe gị mkpa ubi na nwa Ogwe mee ka gị na video anya mma ma ọ bụ ubi gị video iji kpochapụ enweghị isi ebe na ise gị na-ekiri 'uche ndị kasị mkpa ọcha. Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac) pụrụ inyere gị aka mfe nweta na. Nke a video cropper maka Mac (Yosemite gụnyere)-enye gị ohere ịgbanwe akụkụ nke a video faịlụ dị iche iche formats dị ka MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V na ndị ọzọ. Ugbu a, i nwere ike iso ndị a dị mfe ntụziaka n'okpuru ịmụta otú ubi na obere vidiyo na ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe. Pịa ebe a iji chọta ụzọ ubi vidiyo na Windows.
1 Tinye na video ị chọrọ ubi
Na-agba ọsọ a usoro na-aga "File"> "Tinye Files" iji họrọ video faịlụ na ị chọrọ ubi na windo na-emepe. I nwekwara ike iji usoro mgbasa ozi na nchọgharị mbubata faịlụ site na gị iTunes Ọbá akwụkwọ, ma ọ bụ iMovie ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ na dobe lekwasịrị faịlụ ka usoro ihe omume. Nke a mac video cropper akwado iche iche video format dị ka MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V, M4V, mpg, otú ị na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere ndakọrịta nke.
2 akuku gị video
Chetara lekwasịrị video faịlụ; wee pịa "n'Ubi" bọtịnụ na ngwá ọrụ mmanya na edezi window ga-gbapụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-akpaghị aka ubi na video, họrọ "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" nhọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji aka ubi ya, gbatịa na-akpali ndị rektangulu na Preview Ohere na-akọwa ihe ndị ha chọrọ etiti ebe. Ọ bụrụ na afọ ju, pịa "mere"; bụrụ na ọ bụghị, pịa "Tọgharia" iji tọgharịa ntọala. Ee, ọ bụ na mfe!
3 Zọpụta cropped video faịlụ
Mgbe cropping gị video, pịa "Play" bọtịnụ ịhụchalụ N'ihi. Ọ bụrụ na afọ ju, see "Export" button iji zọpụta ya. Ị nwere ike mbupụ gị video dị iche iche formats dị ka MOV, M4V, MP4, M2TS, MTS, TP, DAT, WMV, wdg ke "Formats" taabụ ma ọ bụ kwadebe ya maka nyefe na a mobile ngwaọrụ ke "Devices" taabụ. Na dialog window, họrọ chọrọ video format ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka, ezipụta video ntọala ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na pịa "Mepụta". Ọzọkwa, ị nwere ike kpọọ ya ọkụ ka DVD, ma ọ bụ bugoo YouTube na Facebook ozugbo dị ka amasị gị.
N'ezie, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Mac bụ ihe karịrị a video cropper maka Mac. Ọ bụ a multifunctional video edezi ngwá ọrụ: na mgbakwunye na kewara, merging na cropping video faịlụ, ọ na-enyere gị aka tinye music, akụkụ na utu aha, tinye pụrụ iche mmetụta, na ihe ndị ọzọ.
4K mkpebi, top reviews site n'elu media
Olee otú Iji Ekekọrịta Vine Videos
Olee otú dezie Instagram Video
Olee otú Download KKBOX Music Mfe
Olee otú iji tọghata MKV ka MP3
Olee otú iji tọghata Rhapsody ka MP3
> Resource> Video> Video Cropper maka Mac: Olee otú akuku Video na Mac (Yosemite gụnyere)